Vondrona Eoropeanina : Manamafy ny tokony hisian’ny fifidianana -
AccueilRaharaham-pirenenaVondrona Eoropeanina : Manamafy ny tokony hisian’ny fifidianana
14/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanambara ny masoivohon’ny Vondrona Eoropeanina monina sy miasa eto Madagasikara, Antonio Benedito Sanchez, fa ny Vondrona Eoropeanina dia manamafy ny tokony hisian’ny fifidianana Filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.
Voalaza mantsy fa manaraka hatrany ny fivoaran’ny toe-draharaha eto amin’ny firenena hatrany ny eo anivon’ny Vondrona Eoropeanina. Notsindrian’ity masoivoho ity fa vonona ny hanampy an’i Madagasikara hatrany izy ireo eo amin’ny fanomanana ny fifidianana ao anatin’ny fitoniana sy filaminana ary eken’ny rehetra. “Vonona hatrany ary manamafy ny fiaraha-miasa misy eo amin’i Madagasikara ny Vondrona Eoropeanina. Manohana ara-teknika amin’ny fanomanana ny fifidianana ihany koa”, hoy ity masoivoho vahiny ity.
Tetsy andaniny, nanamafy ny praiminisitra Ntsay Christian fa laharam-pahamehan’ny governemanta tarihiny ny fanatanterahana ny fifidianana ekena sy misokatra ho an’ny rehetra, manaraka ny Lalàm-panorenena.
Mahakasika izay fanomanana ny fifidianana izay indrindra, nisy ny fihaonana teo amin’ny Ceni sy ireo hery politika ary ny fiaraha-monina sivily amin’ny fakan-kevitra sy ny fanaovana tatitra ny dingana efa vita.
Naharitra ora maro ny dinika nisy teo amin’ny telo tonta tamin’izany satria dia nisy ny fanehoan-kevitra sy tolo-kevitra mahakasika ny fanomanana ny fifidianana. Teo ihany koa ny fanaovana tatitra mahakasika ny dingana sy ny asa efa vita sy mbola hovitaina amin’izany fanomanana ny fifidianana izany.